Fangatahana famandrihana "fret" - Tsaradia Mandefasa entana eran'ny Madagasikara
Fandrio Réservez un vol Ny tapakilako Safidio ireo tolotra Ny sidina mora Ny famandrihako toerana Fantaro Ny fandaharan'ny sidina La classe "Privilège" Tsaradia Le Lounge Tsaradia Ny tambajotranay Ireo toeran-kalehanay Fanomanana Entana Firaketana mialoha ny fiondranana Taratasy momba ny dia Fiaramanidina sy kabinina Fenitra ara-pahasalamana Entana Ny zotra mitondra entana manaraka Famandrihana Produits et services Envois spéciaux Expédition et réception Contacts et horaires Tsaradia Vaovao farany Ny mombamomba anay Le groupe Air Madagascar Fifandraisana amin'ny Tsaradia Masoivoho Recrutement My Capricorne
Fangatahana famandrihana "fret"
Tsaradia Fangatahana famandrihana "fret" Tsaradia Tsaradia 2021-06-24 2021-06-24 https://tsaradia.com/
Raha te hamandrika na hahafantatra momban'ny "fret"
Raha lehibe ny fonosana na manana lanja somary ambany ihany noho ny habeany dia homena vidiny manokana. Izany no iangaviana anao hamaritra hatrany ny refin'ny fonosana rehefa manao fangatahana mba hahazoana antoka fa hahazo ny vidiny mirary indrindra. Ny lanjany sy ny habeanydia manaraka ny tahan'ny 1kg = 6dm3
Na inona na inona ny lanjan'ny fandefasana, misy sarany kely indrindra hapetraka. Ny sarany kely indrindra dia ampiharina amin'ny fonosana kely misy refy 25 x 18 x 08 cm ihany. Jereo ireo karazana sarany misy raha te hahalala bebe kokoa ianao.
Ho voarainao ao anatin'ny 48 ora (andro fiasana) ny valiny, hampahafantatra anao ny fahafetezana sy ny fepetra takin'ny fangatahanao.
Jereo ireo numearao ahazoana an'ny Tsaradia